Etu ibudata MP3 na FLAC egwu si Deezer | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe ọbịbịa nke oge ọkọchị, egwu bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi maka ezigbo ezumike. Taa, anyị anaghịzi eju anyị anya na mwepụta nke egwu ọhụụ na-arụ ọrụ egwu, dịka Egwu Apple, Spotify ma ọ bụ Youtube Music. Ọ bụ ezie na ha niile gụnyere oge nnwale n'efu, maka ọtụtụ ndị ọrụ ọ baghị uru ịga n'ihu na-akwụ ụgwọ a kapịrị ọnụ iji gee egwu site n'oge ruo n'oge.
Nkọwa ọzọ ị ga-abanye na ọrụ ndị a bụ na anyị nwere ike iji ha naanị na nyiwe ndị ahụ nwere ngwa gọọmentị, dị ka nke anyị ngwaọrụ mkpanaaka, kọmputa ma ọ bụ mbadamba. Ma gịnị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ kporie egwu anyi n’ebe ndi ozo? Iji maa atụ, n'ụgbọala, na ihe ọkpụkpọ anyị nwere n'ụlọ obibi nke abụọ anyị ma ọ bụ, naanị, anyị chọrọ ịchekwa abụ anyị kachasị amasị anyị na mpaghara. Anyi alugo gi MP3 XD ma taa anyi ga akuziri gi budata ya n'efu site na Deezer.
Ihe mbu choro bu ibudata ihe omume a na akpo NKD, nke anyị nwere ike inweta n'efu na weebụsaịtị ya dabere na ikpo okwu anyị ji. N'ihe atụ anyị, anyị ga-eji Windows 10, ebe SMLoadr achọghị ụdị ntinye ọ bụla na sistemụ ahụ. Naanị ihe a chọrọ bụ emeghe faịlụ dị ka onye nchịkwa, ebe ọ bụ na ọ bụghị na ọ gaghị ekwe ka anyị mee otú ahụ. Ozugbo faịlụ ahụ mepere, anyị ga-ahụ ihe ndị a:
N'ezie, anyị ga-enwerịrị akaụntụ Deezer n'efu ka anyị nwee ike budata egwu na SMLoadr, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị nke ị ga - eke ya ka ị gaa n’ihu. Will ga-abanye nke gị Email na paswọọdụ na ngwanro Nke a priori nzọụkwụ bụ ihe a na-apụghị ịdabere na ya, mana anyị nwere ike idozi ya ngwa ngwa site na ịmepụta akaụntụ naanị maka nzube a. Mgbe ịbanyechara, anyị ga-emerịrị họrọ àgwà nke anyi choro ibudata egwu a. Anyị nwere nhọrọ atọ: 144kbps, 320kbps na FLAC. Iji akụ na keyboard anyị ga-ahọrọ nke anyị chọrọ mgbe niile, wee pịa tinye inabata.
Ugbu a, anyị ga-ahọrọ nhọrọ "Otu njikọ", nke ga-enye anyị ohere ịbanye na ya tinye Deezer URL site na nke ibudata songs.
Ngwanro ga-amalite nbudata na songs otu otu ruo mgbe i mechara album dum. A na-echekwa faịlụ ndị ebudatara na ndabara na nchekwa n'ime nchekwa "Ihe nbudata" site na kọmputa anyị. Ozugbo anyị nwere ebudatara ha, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ha oge ọ bụla na ebe ọ bụla anyị chọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Olee otú ibudata MP3 na FLAC music si Deezer
Aghọtaghị m, gbaghara m, ebe m nwetara iwu MSloadr ahụ. Daalụ
Foto, ọnụahịa na agba nke Samsung Galaxy Note 9
Ndị na-ekwu okwu Sonos dị ugbu a na AirPlay 2 dakọtara